Olee otú Ọkụ MP4 ka DVD on Windows 10
> Resource> Windows> Olee Ọkụ MP4 ka DVD na Windows 10
Nwere ihe isi ike na-ere ọkụ MP4 ka DVD on Ohere 8? Ọhụrụ Windows 10 esesịn mere nza nke ngwa unworkable ebe ya ntọhapụ ụbọchị. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ọkụ DVD disk si MP4 on Windows 10, ihe ị chọrọ ime bụ ịchọta a Windows 10-dakọtara MP4 ka DVD burner maka ojiji. Isiokwu a ga-nwere ike ikwu 2 oké ngwa ka ị mfe ọkụ DVD disk si MP4 on Windows 10 na kasị ọsọ na elu video mma.
Nkwanye 1: All-na-otu MP4 ka DVD burner (onye dị elu video Ntụgharị iji tọghata MP4 ka DVD na Windows 10)
Nkwanye 2: DVD burner (a propessional MP4 ka DVD burner na Windows 10)
Nkwanye 1: Get a ọkachamara video Ntụgharị iji tọghata MP4 ka DVD on Windows 10
• tọghata MP4 ka DVD on Windows 10, na ndị ọzọ na-ewu ewu formats dị ka AVI, MKV, MOV, WMV, wdg
• nyere na ọtụtụ DVD menu ndebiri dị iche iche gburugburu, ụbọchị ọmụmụ, Christmas, agbamakwụkwọ, Nna Day, na ndị ọzọ.
• tọghata ọ bụla obere ngwaọrụ, dị ka iPhone, iPad, gam akporo igwe na egwuregwu ngwaọrụ dị ka PSP, Xbox.
• Tinye metadata ọ bụla ebudatara ma ọ bụ bibiri videos-eme ka ha dị ka iTunes ugwo videos.
Part 1: Olee Ọkụ DVD Disk si MP4 na Video Converter Ultimate
Mgbe launching software, biko pịa "Ọkụ" taabụ na n'elu nke interface, na mgbe ahụ ịdọrọ na dobe gị MP4 video n'ime ya.
Tịm fiọk: Ị na-ekwe ka ọkụ multiple MP4 faịlụ ka DVD n'otu oge, n'ihi ya, i nwere ike dị mbubata dị ka ọtụtụ faịlụ dị ka ị chọrọ.
2. Tinye DVD menu template (Nhọrọ)
Ị nwere ike dị nnọọ pịa "Change Template" n'elu nke interface ma họrọ ọkacha mmasị gị DVD menu ndebiri.
1. Ọ bụrụ na ị ga-amasị hazie gị MP4 video tupu ọkụ, dị nnọọ pịa "Dezie" na gị dị video. Mgbe ahụ dị egwu gị talent na iji elu video edezi atụmatụ gụnyere trimming, cropping, na-agbakwunye watermark na sobtaitel, wdg
2. I nwekwara ike ịtọ ntọala gị DVD, gụnyere akụkụ ruru (16: 9, 4: 3), na DVD àgwà (Standard, Elu àgwà ma ọ bụ Fit ka diski) na DVD usoro (DVD nchekwa, ISO faịlụ, ma ọ DVD disk ).
3. Malite ka ọkụ MP4 ka DVD
N'ikpeazụ na ị nwetara ikpeazụ nzọụkwụ. Dị nnọọ see "Ọkụ" button na ala, na mgbe ị nwere ike n'oge na-adịghị ọkụ DVD disk si MP4 na 30X kasị DVD ọkụ ọsọ.
MP4 ka DVD burner Comparison
Clip, Split, akuku, jikota, Bugharia videos, tinye image na ederede watermarks ka videos, tinye mgbanwe mmetụta na fanye n'okirikiri
Download vidiyo si na video nkekọrịta saịtị
Fast download online videos si YouTube, Hulu, Vimeo, Dailymotion, Facebook, VEVO, Metacafe, BBC, na 100+ akwado saịtị.
Tọghata videos ọ bụla video / audio formats
tọghata videos ka MOV, WMV, MP4, AVI (XviD), 3GP, MPEG-1, MPEG-2, MKV, wdg maka iPhone, iPad, Apple TV, Android na ndị ọzọ obere ngwaọrụ.
Tọghata HD Video
Nkwado convertsion nke H.265 Video, 3D video na 4K video.
Gụgharia Your Media ka TV
iyi gị mgbasa ozi faịlụ na a PC ka a smart TV ozugbo ma ọ bụ ka a ọkọlọtọ TV site media streamers dị ka Chromecast.
Nyefee Video enweghị eriri USB
Paghaa videos gị Apple na Android ngwaọrụ enweghị na-eji eriri USB!
Play ebudatara videos
Play ebudatara videos ntabi na wuru na-ọkpụkpọ
Nkwanye 2: Get a ọkachamara Windows 10 MP4 ka DVD burner
• Ọkụ DVD si MP4 format, na ndị ọzọ dị ka AVI, MKV, MOV, WMV, FLV, mpg, wdg
• N'ibu 40+ static na ike menu ndebiri na-eme ka a pụtara DVD masterpiece.
• Ikpokọta foto na music ike a magburu onwe foto ngosi mmịfe.
• hazie photos, menu ndebiri, DVD n'okirikiri na ndị ọzọ.
Olee otú Ọkụ MP4 ka DVD on Windows 10 na DVD Creator
1. Import MP4 videos a MP4 ka DVD burner maka Windows 10
Pịa "Import" Ibu Ibu gị MP4 videos. Ọ bụrụ na ị na-ere ọkụ multiple MP4 faịlụ otu mgbe, i nwere ike iji "↑", "↓" ekpebi nke otu na arụ orụ di na mbu, nke na otu onye na-aga abuo mgbe n'idebata ha nile. Ọzọkwa, ị pụrụ nyegharịa video clip, ma tinye ihe utu aha.
2. Họrọ DVD menu ma hazie gị videos (Nhọrọ)
Nke a MP4 ka DVD onye maka Windows 10 na-enyere gị ike ahaziri DVD na-ewu omenala-mere DVD menu ndebiri. Pịa na NchNhr taabụ, ị ga-ahụ ọtụtụ free ndebiri egosi na n'akụkụ aka nri nke interface. Ugboro abụọ pịa otu n'ime mmasị gị, na ị ga-emetụta gị DVD faịlụ ozugbo. Ọzọkwa, ndị na akụkụ Akwụkwọ Nsọ, buttons, na thumbnails niile bụ kpam kpam kemeghi dị ka kwa gị mkpa.
Ọ bụrụ na ị na-achọ bugharia gị MP4 mkpachị, ewepụtụ si na-achọghị akụkụ, tinye Watermark ma ọ bụ ndepụta okwu, na dị nnọọ na-aga n'ihi ya site na ịpị pensụl na akara ngosi n'akụkụ ọ bụla video clip.
3. Ọkụ MP4 ka DVD na Windows 10
Nke a MP4 ka DVD burner maka Windows 10 na-akwado DVD 9 na DVD 5. Ya mere, ị nwere ike itinye a ide DVD9 ma ọ bụ DVD5 maka ọkụ. Ọ bụrụ na ị na-chọrọ ịzọpụta ISO oyiyi faịlụ ma ọ bụ mepụta DVD nchekwa, dị nnọọ ego nhọrọ kwa. Mgbe ahụ, pịa "Ọkụ" button ka na-aga. Mgbe ọ mere, a usoro ga-ajụ obere DVD disk-akpaghị aka.
Ọ bụrụ na ị na-ahụghị gị chọrọ ndebiri agbakwunyere na a usoro, ị nwekwara ike ịchọ ọzọ DVD ndebiri site na ịpị green download akụ dị nnọọ n'akuku Template.
Best Video ka DVD Burners - Get Video ka DVD
Olee otú iji tọghata 8mm camcorder etere ka DVD na Mac / Win
Olee otú iji tọghata M4V ka DVD na Mac / Win